Global Voices teny Malagasy » Ny tantara ao ambadiky ny “El árbol del amor,” horonan-tsarimiaina fanadihadiana avy amin’ny vondrom-piarahamonina indizeny Nasa any Kolombia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Novambra 2019 5:50 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Nancy
Sokajy: media, Mediam-bahoaka
Sary nomen'i Karen Fowler-Watt.
Fanamarihan'ny Rising Voices : Manokatra ity sehatra ity izahay ho an'ireo mpitarika tetikasa mba hahafahan'izy ireo mizara ny fizotra sy ny fomba fiasan-dry zareo miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina any an-toerana mba hahafahana mamokatra haino aman-jery izay manaparitaka sy manamafy ny feo any an-toerana. I Karen Fowler-Watt sy i Mat Charles no nanoratra ity lahatsoratra voalohany ity.
“Nianatra niaina tamin'ny ady izahay ary torak'izany koa ny taninay, nanjary zatra izany, ” hoy i Sek, tanora Nasa, teo am-pibanjinana ireo tontolo tendrombohitra maitso, ivalamparan'ny fatin'ireo manodidina azy. ” Nisy vonoan'olona tao amin'ny vondrom-piarahamonina misy anay,” hoy izy nanohy. ” Tamin'izay fotoana izay no nanapahako hevitra hanatevin-daharana ny mpiady anaty akata, mba hiaro ny fianakaviako.”
Nanasarotra ireo tantara mamim-bahoaka sy ireo tantara mirakitra ny soatoavina ho an'ireo ankizy “terena” hiditra ao anatin'ny fifandònana mitàm-piadiana ny tantaran'i Sek milaza ny antony nahatonga azy ho ao amin'ny Tafika revolisioneran'i Kolombia  ( FARC ho an'ny fiandohan-teniny amin'ny teny Espaniola), tafika mpikomy any Kolombia. Tsy nitovy tamin'izany ny zava-nisy marina – ary mbola mitohy misy.
Matetika dia noho ny famaliana faty ary indraindray dia noho ny sakafo mafàna atolotra fotsiny no andraisan'ireo ankizy ireo fitaovam-piadiana. Fa ho an'i A'te, sipan'i Sek, dia mahakasika ny fianakaviany ihany koa. Nijery azy tamin'ny maso babom-pitiavana ny komandin'ny mpiady anaty akata tao an-toerana ary nandrahona ny handratra ireo olo-malalany raha tsy miaraka aminy any anaty ala izy. ” Tamin'io fotoana io, 14 taona aho ary noheveriko fa efa tena antitra izy,” hoy ilay zazavavy. ” Fa nanapa-kevitra ny hiara-hiasa aminy aho noho ny tahotra fa hisy zavatra hanjo ny fianakaviako.”
Sek (Msaoandro) sy A’te (Volana) no mpilalao fototra ao amin'ilay sarimiaina el árbol del amor na Ilay hazon'ny Fitiavana. Mpilalao noforonina izy roa ireo, fa tantara marina natsangana avy tamin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo ankizy 25 mpiady tranainy notsongaina sy ireo tanora sisa velona tamin'ilay fifandonana nisy tao amin'ny indizeny Nasa tao amin'ny valan-javaboaharin'i Jambaló , Cauca any atsimo andrefan'i Kolombia kosa ilay tantarany.
Tetikasa tarihina ekipanà mpikaroka sy olona zà-draharaha avy any amin'ny Oniversiten'i Bournemouth , any Angletera ary niarahana niasa tamin'ny Fikambanana Norveziana miaro ireo mpitsoa-ponenana  sy ny fikambanana kolombiana mpanao asa soa Fondación Fahrenheit 451 ary ny Tyet  ny ‘el arbol del amor’ , sady nifototra taminà andianà atrikasa naharitra telo volana niaraka tamin'ireo ankizy sy tanora 9 hatramin'ny 24 taona .
Singa fototra ho an'ny tetikasanay ny fanapahankevitra tsy hampiasa ireo tafatafa ho fitaovana hairindra . Resy lahatra izahay fa mety hampifanatona ireo ankizy sy ireo tanora mpandray anjara araka izay azo atao io horonantsary io. .
Izany no ilazàna fa feon-dry zareo, tantaran-dry zareo ary sarimiainan-dry zareo izany !
Niainga tamin'ny làlana izay azonay lazaina hoe “fihainoana tantara” izahay. Mpianatry ny oniversite sy mpanao sarimihetsika izahay, fa lasa mpihaino sy mpanamora ao anatin'ny habaka fitantarana iombonana, ary ireo mpandray anjara kosa lasa mpitantara ny tantara.
Namorona ny tantarany manokana tamin'ny alàlan'ny famokarana asakanto ry zareo : fanaovana sary, tononkalo, ‘cartographie humaine’, miafara amin'ny sarimiainan-dry zareo manokana.
Hatramin'ny nisian'ilay fifanaraham-pandriampahalemana manantantara tamin'ny 2016  teo amin'ny governemanta kolombiana sy ny hery ankavia mpiady anaty akata FARC, dia nekena, tamin'ny ankapobeny, fa ny fanaovangazety dia manana andraikitra hikolokolo ny fandriampahalemana sy afaka mitaona ho amin'ny fampihavanana. Saingy ny ankamaroan'ny fandrakofan'ny haino aman-jery ao an-toerana ny momba ilay fifandonana dia mijanona amin'ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta sy ny tafika fotsiny, tsy navela ho re ny feon'ireo niharam-boina.
“Ny fanadihadiana ireo zavatra tsy tian'ny vahoaka ho heno no hany fomba tokana hampandeha ny asa fanaovangazety ao amin'io firenena io” hoy i Javier Osuna avy ao amin'ny Fondación Fahrenheit 451. Niezaka ny hahafantatra bebe kokoa ireo fijaliana izay mety ho nahazo ireo tanora voarohirohy tamin'ny ady an-trano tany Kolombia izahay tamin'ny alàlan’ ny fiarahana niasa tamin'izy ireo, ny fihainoana ireo herisetra nianjady sy ny fanerena azy ireo hiditra ao amin'ny tafika mpikomy.
Vokatry ny atrikasa in-telo niverina ny El árbol del amor :
Atrikasa I : fianaran'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa ny fampiainana fototra amin'ny alàlan'ny fampiasàna Adobe Photoshop sy ny After Effects. Nahita karazana fiangaly fampiainana sy sary ravaka ireo mpandray anjara ary dia nanolo-tena hizatra amin'ny fitantarana ihany koa mba hatokisana azy ireo.
Atrikasa II : fifantohana amin'ny famelabelarana ny lahatsora-tsarimihetsika farany mifototra amin'ireo tantara tamin'ny atrikasa voalohany, sy ny fanatanterahana ny fizotran-tsary araka ilay lahatsoratra.
Atrikasa III : fifantohana amin'ny sary ravaka sy ny fampiainana.
Naharitra dimy andro ny atrikasa tsirairay. Azo jerena eto ny dokan-tsarimiaina vita :
“Misy fampivadiana sary amin'ilay horonantsary” hoy i Paola Albao, lehiben'ny mpanentana. Safidin'ireo tanora mpandray anjara izany. Tian-dry zareo ho hita taratra ny fanjavozavon'ny tantara noforonina sy ny tena marina, izany no ahitànareo hazo sy tendrombohitra mihetsika, fa ireo renirano tena izy sy fiara fitaterana mihetsika miaraka amin'ny tena kodiarana dia nataonay horonantsary na saripika. Marina fa tsy misy anarana ilay horonantsary ho an'ny ankizy, fa tian-dry zareo ho azo antoka ny fahafantaran'ny olona fa tantara marina io, tena nisy marina sady niainan-dry zareo izay hitantsika sy rentsika ao amin'ilay horonantsary.”
Nanomboka nanadihady ny fomba hampiarahana ny fitantaràna sy ny teknolojia izahay mba tsy hahafantarana ireo olona marefo izay nandray anjara tamin'ny fijoroana vavolombelona, tamin'ny famoronana tantara mampangoraka sy mampiaina. Manome fomba vaovao hanoratana tantara ny fifanojoan'ny teknolojia, ireo fomba fanehoana sary, ny fanadihadiana ary ny fikarohana ny haitsikerafoko (ethnographic) , ny traikefa niainana ary ny fitadidiana manokana any ankoatry ny teny soratana na sary nopihana.
Azo antoka fa malia ny fandriampahalemana any Kolombia. Mbola olana goavana ny fanerena ho mpiady ary amin'izao fotoana izao dia sarotra tontosaina ily horonan-tsarimihetsika satria mikorontana indray ny faritr'i Cauca.
Tao anatin'izany toe-draharaha izany, tamin'ny septambra 2019, dia nandeha tany Bogota niaraka taminin'ny Vaomieran'ny Fahamarinana Kolombiana ireo tanora mpanatontosa horonantsary izay manadihady ilay ady an-trano naharitra 55 taona mba handefa ilay horonantsary sy hizara ny tantara niainan-dry zareo. Fotoana tena manan-danja izany, hoy ny fitantaran'ny Vaomieran'ny fahamarinana taminay, ‘mikatsaka ny marina nanjo ireo ankizy tamin'izany fifandonana izany, ny tantarany ary ny fahamarinany” ry zareo.
Na izany aza, sarotra izany asa izany, raha fitadiavana fahamarinana, na fahamarinana iray, dia fahamarinana ampy hampisaintsaina no antenain-dry zareo ho hita. Nisongadina tao amin'ilay eftrano ny lanjan'ny tantara : tanora anankiray mpiady taloha no nizara ny tantarany tamim-pihetsehampo, efa notantarainy izany tany aloha, fa araka ny nolazainy, tamin'ity toe-draharaha ity sy tamin'io fotoana io dia te-hahazo “izany zo izany ho an'ny reniko”, izay maty tanora tamin'ny fifandonana izy. Andro maromaro taorian'ny fitsidihanay dia neken'ny Vaomiera ho vavolombelona  ôfisialy ilay horonantsary.
Vao haingana no natao lohateny lehibe  tao amin'ireo gazety lehibe mpiseho isanandro tany Kolombia ity tetikasa El Espectador ity, miaraka amin'ny ‘podcast’ natokana ho an'ny horonantsary.
Nandray fitenenana ny Loholona kolombiana, Feliciano Valencia , izay misolo tena ny vondrom-piarahamonin'ny indizeny Nasa tamin'ny famoahana voalohany nataonay tao amin'ny Cine Tonalá  any Bogotá :
“Rehefa ny momba ny fifandonana no resahantsika, dia amin'ny maha-mpanao gazety, mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ary mpisolovava no anaovantsika izany,” hoy izy. “Fa eto dia ireo tanora avy any Cauca no milaza ny tantarany manokana, fomba nofidian-dry zareo hitantaràna izany.”
Ny fanantenantsika dia afaka handray anjara kely amin'ny fikatsahana ny fandriampahalemana sy ny fampihavanana aty Kolombia ity horonantsary ity. Mazava ny hafatr'ireo tanora mpamorona sarimihetsika araka ny nilazan'i A'te azy tamin'ny seho faran'ny The Tree of Love (Ilay Hazon'ny Fitiavana ) : ” antenaiko fa fantatr'ireo ankizy sy olondehibe avy any amin'ny toerana samihafa tamin'ny alàlan'ity horonantsary ity ny zavatra niainanay, ka tsy hitsara anay ry zareo ary hihaino anay, amin'ny alàlan'ity tantara ity, ireo izay mampiady,” hoy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/24/144475/
 Tafika revolisioneran'i Kolombia: https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Armed_Forces_of_Colombia
 indizeny Nasa : https://en.wikipedia.org/wiki/Paez_people
 Oniversiten'i Bournemouth: https://www.bournemouth.ac.uk/
 Fikambanana Norveziana miaro ireo mpitsoa-ponenana: https://www.nrc.no/
 fifanaraham-pandriampahalemana manantantara tamin'ny 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process#2016:_Final_Agreement
 lohateny lehibe: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/ninos-del-cauca-hicieron-un-corto-animado-sobre-sus-vivencias-en-la-guerra-articulo-876738
 Feliciano Valencia: https://twitter.com/felicianovalen?lang=en
 Cine Tonalá: http://cinetonala.co/